Anya Black Panda nke Google | Martech Zone
O meela ọnwa ole na ole kemgbe Google mma algọridim ya na ama Panda melite ma anyị nọ na elu nke ọzọ… Ihe ngosi Panda 2.2. Edere m echiche m Ebe a na Ebe aMa na-agbagwoju anya ma ọ mere ka ihe ọ bụla dị mma.
O mere; Otú ọ dị, kụrụ nnukwu saịtị dịka ChaCha na-enweghị ịdọ aka ná ntị. ChaCha gbara ọkụ ma rụọ ọrụ ozugbo iji meziwanye nkatọ ụfọdụ ha nụrụ site na ndị ndụmọdụ SEO… DK New Media gụnyere. N'ezie, ChaCha ulo oru ohuru, ngwa ngwa, uzo di nma nke saiti ha taa!
Ọnwụ dị otú a nke dị njọ bad mana iji mee ka ihe ka njọ, peeji nsonaazụ ọchụchọ nke ChaCha na-achịkwa bụ nke saịtị ndị ọzọ na-achị ugbu a… na-ehichapụ ọdịnaya ChaCha na-enweghị ikike. Ouch. Ya mere nta, ọzọ niche saịtị na-ezu ohi ọdịnaya nke ChaCha bụ ugbu a ogo n'ọkwa ọchụchọ karịa peeji ChaCha n'onwe ha. Offọdụ n'ime saịtị nwere njikọ njikọ na-egosipụta n'ụzọ doro anya na ọdịnaya sitere na ChaCha.
A na-enwe mkparịta ụka na-aga n'ihu banyere nke a na-eme n'oge na-adịghị anya Nzukọ Webmaster nke Google. Ekwenyeghi m ma ọ bụrụ na Matt azaghachiri Shawn na ChaCha… mana ha kwesiri nzaghachi. Ma ọ dịkarịa ala, Google kwesịrị iwepụ anya ojii a ma kwusi ọdịnaya ejiri ihe mejupụta nke mbụ.
N'ụzọ na-emegide onwe ya, dịka eri sitere na SEMdude gụrụ, Matt Cutts bụ aja. Chei!
Kemgbe 2006, ChaCha azaala ihe karịrị otu ijeri ajụjụ… ma kwụọ ndị nduzi ha na ndị ọrụ ha nyocha ma chọta azịza ha. Nke ahụ anaghị ezute profaịlụ nke otu ụlọ ọrụ ọdịnaya… mana okporo ụzọ were mmiri. Ihe niile nke ChaCha bụ nke mbụ - ọbụnakwa tinye ya na azịza Google! Anyị ga-ahụ otu saịtị ChaCha kachasị ọhụrụ na Panda wepụtara ọhụrụ na-emetụta ụlọ ọrụ.
Tags: algọridimChachaalgorithm nke googlegoogle algorithm mgbanwepanda googlepanda